Naya Post Nepal | कस्तो होला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
कस्तो होला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) यो सातामा स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । टाढिएका मित्रसँग नजिकिने समय छ । कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी आइलाग्नसक्छ । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघी बढ्नेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । मध्य सातामा झञ्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने समय छ ।
वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो ) यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नयाँ काममा सफलता मिल्नसक्छ । मित्रजनको साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ) यो हप्तामा धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा रुचि बढ्ने र वैदेशिक क्षेत्रको काम अघी बढ्नेछ । मध्य सातामा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । शेयर बजारको लगानी नोक्सानी बढ्न सक्छ ।
कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) यो साता मित्रताको बन्धन कसिने समय छ । नोकरी गर्नेले मान सम्मान पाउने छन् । धर्म, तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । सफल यात्रा र नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ , तर स्वास्थय मापदण्डको पालना गर्नु पर्छ ।
सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ) यो हप्तामा रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । कला, साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । आफन्तहरूको सहयोगले कामहरू अगाडी बढ्नेछन् । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । शत्रु क्षय होलान्, तर नाक तथा घाँटीमा समस्या बढ्न सक्छ अत: स्वास्थ्य प्रति सजगता हुनुपर्छ ।
कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) यो साता काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंको खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नसक्छन् । बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । साताको अन्त्यमा परिवारमा जमघट वा धार्मिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । दैनिक कामहरू अगाडि बढ्न थाल्दछ ।
तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ) यो साता घुमफिर, मनोरञ्जनका साथै धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ, तर स्वास्थ्य प्रति सजग रहनु पर्छ । सन्तान सुख पनि मिल्नेछ ।
वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु ) लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पूरा हुनेछन् । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । नयाँ व्यक्ति सँग भेटघाट हुने समय छ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । मध्य सातामा अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ ।
धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे ) यो साता धार्मिक र सांस्कृतिक समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । आदर्श ब्यक्ति सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ र घरायसी झमेलामा परिएला ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि ) यो साता स्वास्थ्यमा समस्या बढ्न सक्छ । कलहको योग भएकाले कसैसँग बोल्दा वा ठट्टा गर्दा सतर्कता अपनाउनुहोला । पुँजी बजारमा लगानी गर्नु पनि उपयुक्त नहोला । मध्य सातामा साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला । उपहार पाइने सम्भावना पनि छ ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा ) यो सातामा मन पर्ने वस्त्र, अलंकार आदि पाइने योग छ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ । प्रेमका कोपिलाहरू फक्रिएर जानेछन् । अध्ययन – अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्छ ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि ) यो सातामा रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनसक्छ । पारिवारिक भेटघाट हुनुका साथै इष्टमित्रहरूसंग पनि मेलमिलाप हुनेछ । धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । प्रेममा सफलतापनि पाईनेछ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्छ ।
२०७८ माघ ९, आईतवार प्रकाशित0Minutes 168 Views